क्रिसमसको पुर्वसन्ध्यामा ६ हजार नयाँ कामदार राख्दै अष्ट्रेलियाका तीन कम्पनी ! « MNTVONLINE.COM
क्रिसमसको पुर्वसन्ध्यामा ६ हजार नयाँ कामदार राख्दै अष्ट्रेलियाका तीन कम्पनी !
कोभिड १९ का कारण जागिर गुमाएकाहरुको निम्ति खुशीको खबर छ । अष्ट्रेलिया पोष्ट, डान मर्फी, बीडब्लूएसले ६ हजार क्याजुअल कामदार भर्ना गर्ने भएका छन् । अष्ट्रेलिया पोष्टले मात्रै ४ हजार नयाँ कामदारहरुलाई सामान डेलिभरिमा रोजगारी दिने गरी आवेदन खोलेको छ । यो माग २ सय १० वर्षको ईतिहासमै पहिलो पटक यतिसंख्यामा भएको अष्ट्रलिया पोष्टले जनाएको छ ।
कोरोनाबिच क्रिसमस घरमै मनाउनुपर्ने अवस्थामा अष्ट्रेलियनहरुको अनलाईन सामान खरिद र त्यसलाई डेलिभरि गर्ने कार्यको पूर्वानुमान गर्दै यी कम्पनीहरुले कामदारको काग गरेका हुन् । अष्ट्रेलिया पोष्टले क्याजुअल मात्र होइन ब्रिसबेन, साउथ अष्ट्रेलिया, तास्मानिया, भिक्टारियामा ३ सय फुल टाईम कामदारको पनि माग गरेको छ ।
अष्ट्रेलिया पोष्टमा काम गर्नका लागि आवेदन दिन यहाँ क्लीक गर्नुहोस् Click Here >>
यस्तै डान मर्फीले एक हजार क्याजुअल कामदारहरुको माग गरेको छ भने बीडब्लुएसले ६ सय क्रिसमस क्याजुअल कामदारको अपेक्षा गरेको छ ।
डान मर्फी र बीडब्लूएसको कामका लागि भने १८ वर्ष उमेर पुगेको र आरएसए लाईसेन्स भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । डान मर्फीमा जागिरको लागि आवेदन दिन यहाँ क्लीक गर्नुस् Click Here >>
यस्तै बीडब्लूएसमा आवेदन दिन यहाँ क्लीक गर्नुस् Click Here >>